किन भयो काग कालो ? यस्तो छ कारण !! | सुदुरपश्चिम खबर
किन भयो काग कालो ? यस्तो छ कारण !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८
झुठ बोले कौवा का टे’ भनाई तपाइले सुन्नु भएको होला तर सेतो काग देख्नुभएको छ? काग सधैं कालो हुन्छ भन्ने तपाइले भन्नुहुनेछ तर आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो सेतो कागको बारेमा बताउनेछौँ, जसको बारेमा तपाईले कमै सुन्नु भएको होला । सामान्यतया हाम्रो वरपर पाइने कागहरू कालो हुन्छन् र तिनीहरूलाई अशुभ मानिन्छ तर सेतो कागलाई अशुभ मानिँदैन र भारत मध्यप्रदेशको दत्तवारामा यस्ता कागहरू देखिएका छन्। यसअघि सन् २०१७ मा पनि सतनामा सेतो काग देखिएका थिए ।
तर, कागको रङ परिवर्तन हुनुको पछाडि वैज्ञानिक कारण छन् । सेतो कागहरू पनि अन्य कालो कागहरू जस्तै हुन्छन् तर वंशाणुगत कारण केही कागहरूको रङ सेतो हुन्छ। संसारमा यस्ता धेरै प्रजातिका काग छन्, जसको शरीरमा कतै सेतो दाग हुन्छ।
तर, पौराणिक मान्यता अनुसार काग सेतोबाट कालो हुने फरक कथा छ । मान्यता अनुसार धेरै पहिले एक ऋषिले सेतो कागलाई अमृत खोज्न पठाएर अमृतको जानकारी मात्र ल्याउन आदेश दिएका थिए । वर्षौंको मिहिनेतपछि सेतो कागले अमृत फेला पार्यो, तर यति मिहिनेतपछि उसलाई पनि अमृत पि उ न लालसा भयो । कागले अमृत पि ए र ऋषिलाई यसबारे जानकारी गरायो।
अमृत ​​पि ए को कुरा सुनेर ऋषि कागमाथि रिसाए र श्रा प दिए कि प्रतिज्ञा तोडेर उसले आफ्नो अपवित्र चुचुरोले पवित्र अमृत टिपेको छ, त्यसैले मानिसहरूले उसलाई घृ णा गर्नेछन् र सधैं अशुभ मानेर उहाँको दु ष्ट ता गर्नेछन् । यो श्रा प दिएर भिक्षुले आफ्नो कमण्डलुको कालो पानीमा सेतो कागलाई डु बा ए पछि कागको रंग कालो भयो ।
तर, सेतो कागका बारेमा चराविज्ञहरू लाखौं कागमध्ये एउटाको रंग सेतो हुने विश्वास गर्छन् । यो सेतो काग देखेको नर्मदा नदीको किनारमा रहेको गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उक्त काग विगत तीन दिनदेखि यताउता घुमिरहेको छ । भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापकका अनुसार अ ल्बि नि ज्म प्रक्रिया पूरा नभएका कारण केही काग मौलिक रंगका नभई सेतो रङका जन्मिएका छन् ।
क्याप्चा हल गर्नुहोस् *7+3=